आदर्श बजेट कार्यान्वयन कस्तो हुने? - HarekKhabar.com
आदर्श बजेट कार्यान्वयन कस्तो हुने?
सधै झै बजेटको पक्ष बिपक्षमा यस बर्षको बजेटका पनि चर्चा परिचर्चा भएका छ्न् । कामचलाउ बजेट ल्याउने प्रेसर भएता पनि बितरणमुखी बजेट ल्याइएको र कोरोना कहर केन्द्रित भनेतापनी बिगतका बर्ष झै सबै समेट्ने प्रयास देखिएको छ । चुनाबको तयारी रणनीति मानिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अर्थ मन्त्री बिष्णु पौडेलले आग्रह गरेका छन् ।
महामारीको नियत्रण रोकथाम र उपचारमा नै केन्द्रित हुनुपथ्र्यो र त्यसै अनुरुप बजेट केन्द्रित गरिएको छ । कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रस्तुत गरिएका योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने ।
खोप लगाएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र पुरानै लयमा फर्किने विश्वासका साथ राजश्वको लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको स्पष्ट उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले मतदाता प्रभावित पार्न नभई अभिभारा पूरा गर्न बजेट ल्याएको दावी गरे ।
उनले बजेटले वर्तमान चुनौतीलाई बुझेको, देखेको र सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम तथा योजनाका साथ आएकाले कार्यान्वयन गरिने र बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरु पनि हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारले पर्याप्त खोप भित्र्याउन विभिन्न तहमा तयारी सुरु गरेको छ ।